ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ – Dhamma Training Center
ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ
ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)
Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
kusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
ကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်သည့် ဖဿ ၊ စေတနာ၊ ဝိညာဏ်ဟူသော နာမ်အာဟာရသုံးပါး ပစ္စည်းတရား တို့သည် အတူယှဉ်၍ဖြစ်ကုန်သော စိတ် စေတသိက် နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း စိတ်ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(စ-၁) လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ၁-ကမ္မဇရုပ်၊ ၂-စိတ္တဇရုပ်၊ ၃-ဥတုဇရုပ်နှင့် ၄-အာဟာရဇရုပ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား၏။(ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရတို့ပင် ဖြစ်၏)
(စ-၂) ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ၄-ပါး အနက် ကံက စေတနာအာဟာရဖြစ်သည်။ စိတ်က ဝိညာဏအာဟာရ ဖြစ်သည်။ အာဟာရက ရုပ်အာဟာရပင် ဖြစ်သည်။ ဥတုကြောင့်ဖြစ်သည့် ရုပ်ကလည်း ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်နှင့် တပြိုင်တည်း ဖြစ်လာပါသည်။
(စ-၃) ဤ ကံ စိတ် ဥတု အာဟာရတို့၏ ထောက်ပံ့မှုကြောင့်ပင် သာမာန်မျက်စိဖြင့် ကြည့်၍ပင် မမြင်နိုင်လောက် သည့် ကလလရေကြည်မှသည် ကိုယ်ကောင်ကြီးအဖြစ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ကြီးထွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
(ဆ-၁) ကမ္မရုပ်အာဟာရအားကြီးသော အချို့ နတ်၊ ပြိတ္တာ၊ ငရဲသားတို့သည် အဆီသြဇာအတွက် အစာအာဟာရစား သုံးရန် မလိုအပ်ဘဲ အဇ္ဈတ္တသြဇာက ထောက်ပံ့ထားသောကြောင့် ကာလရှည်ကြာစွာ တည်တံ့နိုင်ကြ၏။
(ဆ-၂) အမိဝမ်းတွင်းရှိ သူငယ်သည်လည်း အမိ၏အာဟာရမပြန့်နှံ့သေးမီ ရက်သတ္တတစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်ခန့်အတွင်း တိဇရုပ်ရှိ သြဇာက ထောက်ပံ့ထားသည်။ ကာမာဝစရနတ်များသည် ဥပပတ္တိပဋိသန္ဓေအားဖြင့် နတ်ဖြစ်စ နတ်သြဇာကို မမှီဝဲရမီလည်း တိဇရုပ်ရှိ သြဇာကပင် ထောက်ပံ့ထား၏။
(ဇ-၁) ဤဘဝကို ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ် မှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တစ်ဘဝတာ အသက်ရှင်ရေးကို ရုပ်အာဟာရတစ်ပါးက ထောက်ပံ့သည်။
(ဇ-၂) နာမ်အာဟာရသုံးပါးကမူ တစ်ဘဝပြီး၊ တစ်ဘ၀ သံသရာခရီးရှည်မဆုံးမချင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ရှင်သန်ရေးကို ကျေးဇူးပြုနေပါသည်။
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa āhārapaccayena paccayo.
Akusalā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.
အကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်သည့် ဖဿ ၊ စေတနာ၊ ဝိညာဏ်ဟူသော နာမ်အာဟာရသုံးပါး ပစ္စည်း တရားတို့သည် အတူယှဉ်၍ဖြစ်ကုန်သော စိတ် စေတသိက် နာမ်ခန္ဓာတို့အား အာဟာရပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa āhārapaccayena paccayo.
Akusalā āhārā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
အကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်သည့် ဖဿ ၊ စေတနာ၊ ဝိညာဏ်ဟူသော နာမ်အာဟာရသုံးပါး ပစ္စည်း တရားတို့သည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အာဟာရပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။
(ဇ-၃) ရုပ်အာဟာရဖြစ်သော အစားအသောက်များကြောင့် ကမ္မဇရုပ်၊ စိတ္တဇရုပ်၊ ဥတုဇရုပ် အာဟာရဇရုပ်များ အင်အား တောင့်တင်းခိုင်မာလာသည်ကို သိသာနိုင်ပေ၏။
(ဇ-၄) နာမ်အာဟာရဖြစ်သည့် ဖဿ ၊ ဝေဒနာ၊ ဝိညာဏ်တို့၌လည်း အာရုံခြောက်ပါး တစ်ပါးပါး ဖဿ ‌ကြောင့် တွေ့ထိလာပြီး၊ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး အာရုံအရသာကို ဝေဒနာက ခံစားသည်။ ဖဿ အာဟာရ၏ လှုံဆော် ပေးခြင်းကြောင့် တဏှာကြီးပွားကာ သတ္တဝါများ သံသရာကို ပျော်ပျော်ကြီး ကျင်လည်နေခြင်းကပင် နာမ်အာဟာရကြောင့်ပေတည်း။